लाइसेन्सका लागि लाइन बस्ने दिन गए, देशभर अनलाइनबाटै फर्म भोर्न मिल्ने हेर्नुहोस तरिका – नेपाली सूर्य
लाइसेन्सका लागि लाइन बस्ने दिन गए, देशभर अनलाइनबाटै फर्म भोर्न मिल्ने हेर्नुहोस तरिका
January 10, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on लाइसेन्सका लागि लाइन बस्ने दिन गए, देशभर अनलाइनबाटै फर्म भोर्न मिल्ने हेर्नुहोस तरिका
२६ पुस, काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)का लागि रातिदेखि नै लाइन बस्न जाँदै हुनुहुन्छ ? यदि आइतबारसम्म पर्खिनुभयो भने देशको जुनसकै कार्यालयका लागि अनलाइनमै फारम भर्ने सुविधा पाउने हुनेछ ।
यातायात व्यवस्था विभागले आइतबारदेखि देशभर नै लाइसेन्सका लागि अनलाइनमै फारम भर्न सकिने सुविधा शुरु गर्दैछ ।
पुस ०७३ देखि शुरु भएको यो सेवा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र कार्यान्वयनमा थियो । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईका अनुसार अब देशभरि नै शुरु गर्ने तय भएको हो ।
अहिलेसम्मका सिकाइका आधारमा अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाइने उनको दाबी छ । विभागको अनलाइन सेवामा एक वर्षबीचमा सर्भर डाउन भएर पटक-पटक समस्या पनि आएको थियो ।
अब त्यस्तो अवस्था नआउने वातावरण तयार गरेर उपत्यका बाहिर पनि सेवा लैजान लागिएको भट्टराईले बताए ।
विभागले अनलाइन लाइसेन्स फारम भर्ने सुविधालाई विस्तार नगर्दा मोफसलका कार्यलयमा फारम भर्नेहरुको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । लामो अन्तरालमा लाइसेन्स खुल्ने भएकाले उपत्यकाबाहिरका लाखौं सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयमा ठूलो सास्ती बेहोर्ने गरेका छन् ।
‘हामीले सबै कार्यालयलाई अनलाइन फारम खोल्न परिपत्र गरेका छौं । निर्देशन लागू नभए कार्यालय प्रमुख कारवाहीमा पर्छन्,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘त्यसका लागि सिस्टम तयार छ ।’
‘लाइन बस्ने दिन सकिए’
अनलाइन फारमको व्यवस्थापछि विभागमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता लगभग हट्नेछ । विभागका लाइसेन्स कार्यालयहरुमा फारम बुझाउन एकै दिन हजारौं सेवाग्राही लाइनमा बस्ने गरेका छन् ।
तर, सीमित व्यक्तिको फारम बुझेर धेरैलाई फिर्ता पठाउने गरिएको छ । अब लाइसेन्स कार्यालयहरुमा फारम भर्नेहरुको भीड त लाग्ने छैन नै, यसले अन्य सेवाग्राहीको सास्ती पनि हटाइदिनेछ ।
अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थाले विचौलियाहरुबाट सेवाग्राही ठगिने सम्भावना पनि धेरै हदसम्म हट्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।
अहिले यातायात विभाग विचौलियाको बढी चलखेल हुने निकायमध्ये अग्र स्थानमा छ । सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम बुझेर कर्मचारीसँग साँठगाँठ गर्दै लाइसेन्स बनाइदिने ठूला समूहहरु विभागका कार्यालयआसपास छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।
अब लाइन बस्न जानेहरु नहुने भएकाले विचौलियाले चलखेलको अवसर नपाउने दाबी विभागको छ । तर, काठमाडौंमा अनलाइन फारम शुरु भएपछि पनि विचौलियको दबदबा घटेको देखिँदैन ।
विभाग भने अनलाइन फारम शुरु भएपछि दलालहरुको सक्रियता खुम्चिएको दाबी गर्छ ।
कसरी भर्ने फारम ?
विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा यो सेवाको लिंक उपलब्ध छ । विभागको होम पेजमै ‘अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र’ भन्ने लिंक मेनु छ । यो लिंक क्लिक गरेर फारम भर्न सकिनेछ ।
त्यसमा आफूले लाइसेन्स लिन लागेको कार्यालयलाई छान्नुपर्छ । र, फारममा आवदेनकर्ताले सबै व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्छ ।
आफ्ना आधिकारिक कागजातमा उल्लेखित विवरणसँग मिल्ने गरी फारम भरेर अनलाइनमा ‘सबमिट’ गर्नुपर्छ र त्यसपछि अनलाइन सिस्टमले नै दर्ता भएको फारमको प्रमाणपत्र दिनेछ, जसलाई पि्रन्ट गर्नुपर्छ ।
सिस्टमले नै बोलाउने
सोही प्रमाणपत्रमा विभागको कार्यालयमा कुन दिन उपस्थित हुने भनेर उल्लेख हुनेछ । सिस्टमले भनेकै दिन विभागका कार्यालयमा पुगेर आफ्ना नागरिकतासहितका कागजात पेश गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि लाइसेन्सका लागि आवश्यक तस्बिर खिच्नुपर्छ र आफ्नो औंठाछापसहितको बायोमेटि्रक दिनुपर्छ । आवश्यक शुल्क पनि विभागको कार्यालयमै तिनुपर्छ ।
‘हामीले हरेक कार्यालयले दिनमा कति लाइसेन्स वितरण गर्न फारम बुझ्ने भन्ने कोटा तोकेका छौं,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘सोहीअनुरुप सिस्टमले आवदेनकर्तालाई बायोमेटि्रक दिन जाने मिति स्वतः बताइदिन्छ । यसले कार्यालयमा भीड घट्छ भने सेवाग्राहीलाई पनि सास्ती पर्दैन ।’
लाइसेन्स फारमलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिँदै गर्दा स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण भने प्रभावित नै छ । पर्याप्त कार्ड नहुँदा ट्रायल पार गरेका र नवीकरणका लागि कागजात पेश गरेका करिब तीन लाख चालक स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन् । विभाग भने छिट्टै समस्या समाधान हुने दाबी गरिरहेको छ ।
भाेट हालेपछि डा बाबुराम भट्टराइले गरे यस्ताे ट्वीट …..